21Wilberforce Freedom Center - 21Wilberforce Freedom Center
CHIRATIDZO: MYANMAR / BURMA
Mamiriro ekuvandudzwa kwemamiriro ezvinhu uye kuongororwa, pamwe neKutora Action uye kumusoro-kune-zuva Vhidhiyo Nhau, Media Nhau, Mepu uye kuongororwa kweFORB uye kodzero dzevanhu.
Verenga nhau, yambiro, uye mishumo kubva kuUS Commission yeInternational Chitendero Rusununguko (USCIRF).
ZVAKAITWA: UN FORB NEWS
Tsvaga UN webhusaiti uye ReliefWeb yenyaya dzazvino nedzenhoroondo zvine chekuita neFoRB uye kodzero dzevanhu.
Kurudzira nhengo yako yeCongress kuti itsigire mutemo unoda hurumende yeUS izere nemhinduro dzekunze kusunungura vatungamiriri vakasungwa veBurma uye kutsigira vezvitendero nemadzinza anotarisana nemhirizhonga.
Tora chikamu mumishandirapamwe yedu kana kugadzira yako wega kuti vagadziri vemitemo muWashington nepasirese vanzwe kubva kuvagari-makwikwi erusununguko rwekutenda nekutenda.
Ichi chikamu chinosanganisira maturusi ekusimbisa kukanganisa kwako pakukurudzira uye nemishandirapamwe. Izvi zvipfupi zvigadzirwa zvinoratidzira zvakanakisa maitiro ehurongwa, mameseji, kuunganidza nekusimudzira nyaya.
MABHUKU AZVO ZVINOGONESESA
Pano iwe unogona kuwana zviwanikwa uye mapuratifomu aunoda kuti uite mune yakatarwa yekuita mishandirapamwe.
1) Zvakakosha zveFoRB - ZviwanikwaIzvi zviwanikwa zvinobatsira chero munhu anofarira rusununguko rwezvinamato rwepasi rose kuti azive nezvekuti nei zvichikosha munharaunda uye nezvavangaite kuchengetedza rusununguko rwekunamata nekutenda kuvanhu pasi rese.
2) Zviwanikwa zveKutenda NharaundaIzvi zviwanikwa zvinobatsira vatungamiriri vezvitendero kuti vazive zvipingamupinyi zviripo parusununguko rwechitendero chenyika dzese uye kugadzirisa nyaya idzodzo munharaunda dzavanogara.
3) Zviwanikwa zveVadzidzi VatsvagiriIzvi zviwanikwa zvinobatsira vadzidzi kudzidza nezve rusununguko rwezvitendero zvepasi rose nemikana nemasangano anozovabatsira kuti vaite mutsauko.
4) Zviwanikwa zveVamiriri & VamiririIzvi zviwanikwa zvinobatsira varatidziri kuti vawedzere kunzwisisa nekusimudzira rusununguko rwekunamata pasirese munzvimbo dzavanogara, nyika, nyika, uye nharaunda dzekunze.
5) Zviwanikwa zveVadiki VatungamiririIzvi zviwanikwa zvinobatsira vatungamiriri vechidiki uye kudzidza nezve rusununguko rwenyika dzechitendero uye nekuwana mikana nemasangano anozovabatsira kuti vaite mutsauko.
6) Zviwanikwa zveVadziviriri veMutemoIzvi zviwanikwa zvinoshongedzera magweta ekurwira kodzero dzevanhu nemitemo yekutsvagisa zviri pamutemo uye netiweki yekubatanidza kuchengetedza kodzero dzakakosha dzevose.
7) Zviwanikwa zveVagadziri vePolisiIzvi zviwanikwa zvinobatsira vagadziri vemitemo kugadzira marongero nezvikumbiro zvekusimudzira rusununguko rwekunamata.
Dzvanya pamufananidzo uri pamusoro kuti uwane Raibhurari.
Tsvaga kana kutarisa raibhurari yekuziva yezvinyorwa zvemultimedia uye zvekushandisa zvakarongedzwa nezvikamu uye meta tag.
Kutsauka & Kumhura Mitemo
Kuuraya vanhu & Kutyisa Kudzivirira
IRF / FORB Zvakakosha
Mutemo & Mutemo
National Maitiro & Kuongorora
Chitendero Kutambudzwa & Kudzvinyirira
Vakatambudzwa & Vasungwa
US POLICY & KUNYORWA
US Congressional Scorecard
Inotarisisa zvinyorwa zvekuvhota zvemitezo yedare reUSeneti neImba yeVamiririri yemabhiri, zvisarudzo, uye zvigadziriso zvinotsigira rusununguko rwekunamata ...
Ndiani Anondimiririra muCongress?
Shandisa kero yako kana tinya pamepu kuti uwane maSeneta eU.S. uye Mumiriri.
IRF Mitemo Yekutevera
Yazvino uye yezvakaitika zviitiko zvemitemo --Tsvaga Congress.gov uye ongorora IRF inoenderana nemitemo, chiitiko, uye vatambi.
US Seneti & Imba IRF Voting Rekodhi
1998 IRF Mutemo Kudzokorora
Iyi 20th Anniversary Retrospective ye1989 IRF Act inotsiva iyo yekudyidzana kuyedza kwakabatsira kubatanidza rusununguko rwenyika dzechitendero mukati memutemo wekunze weUS.
USG FoRB Zviwanikwa
Tsvaga muUS Govt mutemo, marongero, federal makodhi, zviitiko, mareport, nezvimwe: Congress, Executive Bazi, Raibhurari yeCongress, CRS, State paramende, zvibvumirano, nezvimwe.
Rusununguko rwechitendero muAfrica nenyika
Rusununguko rwechitendero muAsia nenyika
Rusununguko rwechitendero muEurope nenyika
Rusununguko rwechitendero muSouth America nenyika
Rusununguko rwechitendero nenyika
Tsvaga uye ongorora 197 emitemo yenyika (idzo dziri mukunyora uye musimba) uye enzanisa maitiro avanodzivirira kana kudzora FORB.
Verenga magungano epasi rese nezvibvumirano zvine chekuita neFoRB nedzimwe kodzero dzevanhu.
Nyika Kuongorora Zvinyorwa
World Dhairekitori reVashoma uye Vagari Vepasi (inotsvaga dhatabhesi)
Vanhu vari pasi peTyisidziro (Inopindirana Mepu)
USCIRF Nyika dzeKunyanya Kunetseka
YAKADZIDZWA neNyika (Wikipedia)
Vhura Masuo World Rondedzero (2020)
Uyghur Chitendero Rusununguko
KUUYA MANJE MANJE
Kutsauka pakutuka & Kumhura
Kuuraya vanhu nehutsinye
YEMAHARA ROUNDTABLE NETWORK
Tsvaga zvinongedzo uye mishumo yedunhu renharaunda dzeFRB uye maforamu.
Sangano reInternet reRusununguko Roundtable riri kushandisa Zoom kutora misangano inogara ichidanwa. Muchikamu chino unogona RSVP, tora Zoom, uwane chinetso chekupfura rubatsiro, uye uwane zvinopihwa uye mapepa emapeji aya.
IRF ROUNDTABLE (DC) ZVAKAITIKA
Karenda uye kuverenga kwenguva yezvinoitika zveZviitiko zveDC IRF Roundtable.
Iyi nzvimbo yekuzivisa yepamhepo, yakazadzwa nezvishandiso uye ruzivo, inogona kushandiswa mukudzivirira nekufambisira mberi kwerusununguko rwepasi rose rwechitendero, kutenda, uye hana.
Chii Chiri Kuitika Izvozvi
MASHOKO - ITA CHINHU
Coalition Burma Congress Campaign
ZVINOITIKA IRF ZVIITIKO KURONGWA
IRF Roundtable Events (DC)
Dzvanya pane chinongedzo kuti uwane curated zviwanikwa
Religious Freedom Basics: Zviwanikwa izvi zvichabatsira chero ani zvake anofarira rusununguko rwechitendero chepasi rose kuti adzidze nezvekuti nei zvakakosha kunzanga uye zvavanogona kuita kuchengetedza rusununguko rwechitendero uye kutenda kwevanhu pasi rese. Dzvanya kuti uwane nyaya kubva kutenderera pasirese, nzira dzaungabatike nadzo, uye zvinongedzo zvekuwana matafura uye zviitiko. Svika zviwanikwa
Nharaunda dzekutenda: Zvishandiso izvi zvichabatsira vatungamiriri vezvitendero kuti vazive zvipingamupinyi zvazvino kurusununguko rwechitendero chepasi rose uye kugadzirisa nyaya idzodzo munharaunda dzavanogara. Dzvanya kuti uwane nyaya, ruzivo rwevamiriri vematunhu vanoshanda nesimba kusimudzira IRF, uye zviwanikwa zvebasa kuti vatungamiriri vagovane nenharaunda dzavanogara. Svika zviwanikwa
Vatsvakurudzi vezvidzidzo: Izvi zviwanikwa zvichabatsira vadzidzi kudzidza nezve rusununguko rwechitendero chepasirese nemikana uye masangano anovabatsira kuita mutsauko. Dzvanya kuti uwane nhau uye ruzivo nezve IRF, mikana yekudzidzira, tsvakiridzo yezvidzidzo, uye zvimwe zvakawanda. Svika zviwanikwa
Vamiriri & Vamiriri: Zviwanikwa izvi zvichabatsira vatsigiri kuti vawedzere kunzwisisa uye kutsigira rusununguko rwechitendero chepasi rose munharaunda yavo, nyika, nyika, uye nharaunda dzepasirese. Dzvanya kuti uwane ruzivo pamusoro pezvino nyaya dzerusununguko rwechitendero pasi rose, maturusi ekukurudzira, nzira dzakapfuura, uye nzira dzaungagadzira yako danidziro yekusimudzira IRF. Svika zviwanikwa
Vatungamiri Vechidiki: Zviwanikwa izvi zvichabatsira vatungamiriri vadiki uye kudzidza nezve rusununguko rwechitendero chepasi rose uye kuwana mikana nemasangano anovabatsira kuita mutsauko. Dzvanya kuti uwane nhau uye ruzivo nezve IRF, mikana yekudzidzira, tsvakiridzo yezvidzidzo, uye zvimwe zvakawanda. Svika zviwanikwa
Vadziviriri vemutemo: Zviwanikwa izvi zvinopa magweta anorwira kodzero dzevanhu zviwanikwa zvekutsvagisa zvemutemo uye netiweki yekubatanidza kuchengetedza kodzero dzakakosha dzevose. Dzvanya kuti uwane zvishandiso zvekutsvagisa pamhepo, zvigadziriso zveIRF, ruzivo nezvenyaya dzazvino, uye network yemutemo. Svika zviwanikwa
Vagadziri vePolisi: Zviwanikwa izvi zvichabatsira vanogadzira mitemo kugadzira mitemo nezvikumbiro zvekusimudzira rusununguko rwechitendero chepasi rose. Dzvanya kuti uwane ongororo, IRF inogadziridza, ruzivo rwezvazvino nyaya, uye maitiro aungaita neIRF kuburikidza nemutemo uye kumiririra. Svika zviwanikwa
Dzidza zvakawanda nezvenyaya dzine chekuita nerusununguko rwechitendero nekutenda (ForRB).
Gadzirira & Chitima
Maitiro akanakisa ekumiririra uye mishandirapamwe.
Zvishongedze kuita chiito
Kurudzira uye tungamira shanduko kune vanotambura uye vakadzvinyirirwa. Gadzira kana kujoina mushandirapamwe.
Kushanda Pamwe Chete Kukudzwa Kwevose
Taura nesu kuburikidza neemail
Online Rusununguko Center
Batsira / Tsigira Rusununguko Center